Ireo no iPhone mifanaraka amin'ny "Search" novonoina | Vaovao IPhone
Ireo no iPhone mifanaraka amin'ny "Search" rehefa maty
Ny orinasa Cupertino dia voatsikera mafy (ary rahoviana no tsy fety izany?) Satria raha ny teoria, ho an'ny maro, dia tsy ampy tanteraka ny zava-baovao ao amin'ny iOS 15. Na izany aza, fotoana izao hifantohana amin'ireo fampiharana amin'ny iOS izay tanterahina ary maneho tena fandrosoana ara-teknolojia.
Miaraka amin'ny iOS 15, ny iPhone dia mety ho hita na dia novonoina aza ary nesorina ny karatra SIM, na izany aza, tsy ny iPhone rehetra no mifanentana. Hodinihintsika ity haitao izay nampiharin'i Apple tamin'ny iPhone ity tamin'ny fahatongavan'ny iOS 15 ary indrindra raha afaka mankafy azy ianao na tsia.
Miorina amin'ny Apple's Wid Widand (UWB), ilay haitao mitovy amin'ilay nampiasaina tao amin'ny AirTag ary ahafahantsika mahita azy na eo aza ny tsy fisian'ny karazana haitao tsy misy tariby hafa ankoatry ny Bluetooth Low Energy tsotra. Ankehitriny, ny iPhone miaraka amin'ny iOS 15 dia tena miasa ho AirTag, izany hoe ho hitanao izany na dia very aza ny fifandraisana amin'ny tambajotra na novonoina, farafaharatsiny mbola manana ampahany kely amin'ny bateria sisa tavela .
Ny olana dia ny iPhone 11 sy ny fitaovana manaraka ihany no hotohanana. Araka ny efa nolazainay, na dia misy fitaovana hafa misy haitao Ultra Wideband eo akaiky aza dia azo atao ny mamantatra ny iPhone, satria hisy tambajotra harato toerana hamboarina. Ity haitao Apple ity dia mahaliana ny fomba ahafahantsika mahazo bonus fiarovana, hieritreritra bebe kokoa momba izany ny mpangalatra rehefa mangalatra iPhone raha toa ka manohy mampihatra an'io karazana teknolojia io i Apple satria kely ny tombony ho an'ireto.
Lisitry ny fitaovana mifanaraka amin'ny Karoka rehefa novonoina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ireo no iPhone mifanaraka amin'ny "Search" rehefa maty
Cristian Murro dia hoy izy:
Mampalahelo fa hanohy hangalatra azy ireo izy ireo hivarotra ireo sombin-javatra, tsy azo ihodivirana izany, ary rehefa mangalatra anao koa izy ireo dia tsy manontany raha iPhone izy io ary raha nampihetsika ny toerana izy io
Valiny tamin'i Cristian Murro
Manana PS5 ve ianao? Manome anao enim-bolana malalaka an'ny Apple TV + i Sony